एकलमा ‘राधे’ आक्रमक, मल्टिप्लेक्समा दुवैमा दर्शक « Mazzako Online
एकलमा ‘राधे’ आक्रमक, मल्टिप्लेक्समा दुवैमा दर्शक
नयाँ नेपाली बर्ष ०७४ को अवसर पारेर प्रदर्शनमा आएका तीन फिल्महरु ‘लभ लभ लभ’, ‘घामपानी’ र ‘राधे’ ले दर्शकलाई हलसम्म आकर्षण गर्न सफल भएका छन् । प्रदर्शनको पहिलो दिन शुक्रबार अर्थात् बैशाख १ गते र शनिबार हलमा तीन फिल्महरु हेर्न दर्शकको चाप उच्च देखियो ।
निखिल उप्रेती स्टारर फिल्म ‘राधे’ ले एकल पर्दामा दर्शकको राम्रो साथ पायो । प्रदर्शनको पहिलो दिन नै निखिल निर्देशक जगदिश्वर थापा र फिल्म युनिट सहित राजधानीको गोपिकृष्ण हल पुगेका थिए । त्यहाँ उनले दर्शकसँग साक्षत्कार गर्दै दर्शकसँग विफी खिचे । फिल्म ‘लभ लभ लभ’ र ‘घामपानी’ को भने मल्टिप्लेक्स हलमा दर्शकको उपस्थिति राम्रो देखियो । दयाहाङ राई र केकी अधिकारी स्टारर फिल्म ‘घामपानी’ ले अपेक्षाकृत इनिसियल हान्दा ‘लभ लभ लभ’ लाई लामो समयसम्म चल्ने सक्ने फिल्मको रुपमा हेरिएको छ । कारण, दिपेन्द्र के. खनाल निर्देशित फिल्मलाई दर्शकले औधी रुचाएका छन् । सरल प्रेम कथामा बनेको फिल्ममा नायिका स्वस्तिमा खड्का र नव कलाकार सुरज पाण्डेले मन छुने अभिनय गरेका छन् । दिपेन्द्र लामा निर्देशित फिल्म ‘घामपानी’ लाई पनि दर्शकले रुचाएका छन् ।
दर्शकलाई हलसम्म आकर्षण गरेका तीन फिल्महरुले दुई दिनमा व्यापार चाहिं कतिको गरे त ? तीनै फिल्मका निर्माता तथा वितरकले आ आफ्नै तरिकाले व्यापारिक हिसाब सार्वजनिक गरिरहेका छन् । व्यापार जे जति गरेपनि लगानी उठाउन भने तीनै फिल्मले तीन करोडसम्मको व्यापार गर्नु पर्ने आवश्यक छ । ‘राधे’, ‘घामपानी’ र ‘लभ लभ लभ’ ले ६० देखि एक करोडसम्मको लगानी रहेको दाबी गरेका छन् ।